လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ သံဃာတွေပါဝင်မှု အားနည်းနေဆဲ — မြန်မာဌာန
လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ သံဃာတွေပါဝင်မှု အားနည်းနေဆဲ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အာဏာပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် လက်ရှိ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အထက်မြန်မာပြည်ရွှေဝါရောင်သံဃာကွန်ရက်က ဆရာတော်တွေလည်း အများအပြား ပါဝင်နေပါတယ်။ မန္တလေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ လက်ရှိပါဝင်နေပြီး လုံခြုံရေးအတွက် အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဦးဆောင်ဆရာတော်တပါးက-
“ဦးဇင်းတို့ သံဃာ့သမဂ္ဂစစ်ကြောင်းက ၈ ရက်နေ့ထဲက စပြီးလုပ်တယ်။ တရက်မှတော့ မပျက်သေးဘူး။ အဓိကက စစ်တပ်ကနေ အာဏာသိမ်းတာကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ဆန္ဒပြတယ်။ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးထားတာကို လွှတ်ပေးဖို့၊ နောက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ လှုပ်ရှားကြတယ်"
အခုလိုမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်ကို လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ အခုပါဝင်နေတဲ့ ဆရာတော်တွေ ပမာဏဟာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဦးရေလောက်တော့ များပြားခြင်း မရှိသေးတဲ့ အချက်ဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲလို့ RFA က လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
“စစ်တပ်က တောက်လျှောက် သံဃာတွေနဲ့ NLD အစိုးရ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မတည့်အောင် ယုံကြည်မှုတွေ ပျက်သွားအောင်၊ လူမျိုးရေးတွေ ဘာသာရေးတွေ ပျက်သွားအောင် မှိုင်းလုံးတွေ လွှင့်ခဲ့တာ၊ အဲဒါတွေ နားယောင်တာပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ဒေသ ဇာတိတွေ ပြန်သွားတာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ သံဃာတွေ နည်းသွားတာပေါ့။ အဓိကကတော့ စစ်တပ်က သံဃာတွေကို မှိုင်းတွေနဲ့ လာဘ်လာဘတွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့ ပုံစံပေါ့။”
ပခုက္ကူမြို့က လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဦးဆောင်ဆရာတော်တပါးကလည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာကို အလေးထားသင့်တယ်လို့ မိန့်ပါတယ်။
“ကာချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် အနေနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပြည်သားတို့ရဲ့ အကျိုးကို ကြည့်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ အဆုံးအမ သြဝါဒကို လိုက်နာသင့်တယ်လို့ ဦးဇင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ရဟန်းတော်များဟာ ဓမ္မနဲ့အဓမ္မ ယှဉ်လာရင် ဓမ္မဘက်မှာ ရပ်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန့် ရှိတဲ့အတိုင်းပဲ ယနေ့ လမ်းပေါ်ထွက်နေတဲ့ သံဃာတော်များဟာလည်း ဓမ္မဘက်က ရပ်တည်တယ်လို့ ဦးဇင်း ယုံကြည်တယ်။ သံဃာတော်များနဲ့ ဒကာ ဒကာမများရဲ့ ဆန္ဒဟာ အတူတူဘဲလို့ ဦးဇင်းယုံကြည်ပါတယ်။”
ဒီအတောအတွင်း ပြည်ပရောက် မြန်မာဆရာတော်တွေကလည်း CDM အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ကူညီဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီတဝိုက်က မြန်မာတွေကို စည်းရုံးပြီး အလှူငွေကောက်ခံနေတဲ့ ဆရာတော်တပါးကတော့ မေရီလန်းပြည်နယ်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ အရှင် ခေမိန္ဒပါ။
“ပြည်သူ့အစိုးရထံက မတရားအာဏာလုယူသွားတဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ အဓ္မမ ဝါဒ၊ မတရားတဲ့လုပ်ရပ်လို့ မြင်တယ်။ ပြည်သူတွေ ပူလို့ရှိရင် သံဃာတွေလဲ မအေးချမ်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်းတို့က မတရားတာကို ရှတ်ချတယ်၊ ပြည်ပရောက် မေရီလန်း ဗာဂျီးနီးယားမှာ ရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေကနေပြီး မတရားအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို တော်လှန်နေကြတဲ့ CDM မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အလှူငွေတွေကောက်ခံပြီး ပံ့ပိုးနေပါတယ်။”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူ ဆရာတော် အရှင်ဇဝန ကလည်း မြန်မာပြည်တွင်းက ဆရာတော်တွေကို အခုလို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။
“ဆရာတော် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား။ အခုအရေးအခင်းကြီးမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား ဒကာ ဒကာမတွေဘက်က ရပ်တည်ပေးကြပါလို့ တပည့်တော်အနေနဲ့ လျှောက်ထားလိုပါတယ်။ ဒီလို ကြားနေမယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ အကျိုးအတွက် နေပေးသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် သံဃာတော်တွေရဲ့ ပုံရိပ်ဟာ အများကြီး နိမ့်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ သံဃာတော်တွေဟာ သမိုင်းအဆက်ဆက်မှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့သလို အခု ၂ဝ၂၁ မှာလည်း ဒကာ ဒကာမတွေ ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးကြပါလို့ ဆရာတော် သံဃာတော်အားလုံးကို ရိုသေလေးမြတ်စွာ လျှောက်ထားလိုပါတယ်။”
ဒီအတွင်း လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သံဃာတော်ဆရာတော်တွေဟာ အရင် လှုပ်ရှားမှုတွေထက် နည်းပါးပေမယ့် ပမာဏ တနေ့တခြား ပိုမိုများပြားလာနေတယ်လို့ ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေက ပြောပါတယ်။
Cho Cho Yee says:
I have recognized..that3faces of monks on the first row in this movement ( condemning Military Coup) are those who defended Military inacouple of previous months. But in those shots I would provide, colors of robes for each are different.
Two out of those3are also natorious as fake monks who serve as close- followers of the leader of the Coup that can be seen in his trip in Aung Myay ( one guy) and photo comparison of the
FB users of Myanmar. If you ask me to provide those photo- evidence of (3+1) persons in uniform, in casual dress and in monk robes of different colors.. I will be happy to send you some of my own collection vs. face recognition via email attachments.
The fact is that when fake monks with well- recognizable ones lead protests against Coup, who will follow it ...resulting in fewer monks involving in the current Protests. People are getting wiser nowadays.